एक मल कसरी लेख्ने? मल भनेको के हो? Tdk - कसरी लेख्ने।
एक मल कसरी लेख्ने
मल भनेको के हो?
एक मल कसरी लेख्ने?
उद्देश्य हिज्जे गाइड
वायु ग्यास चुली
डाइभि go गग्गलहरू
TA (रासायनिक प्रतीक)
गुन गर्न सक्ने क्षमता